Boeing 737 Max: Mbola tsy voaro?
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Boeing 737 Max: Mbola tsy voaro?
Paul Hudson dia manam-pahaizana momba ny fiaramanidina ary mpisolovava monina ao Washington DC ary mpanorina ny Zon'ny Flyers, fikambanana mpisolo vava ho an'ireo mpandeha fiaramanidina.
Taorian'ny fianjerana roa ary mpandeha an-jatony no maty tany Indonezia sy Etiopia. Ny fiaramanidina dia natsangan'ny FAA sy ny mpanamory fiaramanidina manerantany.
Ny Federal Aviation Administration (FAA) tamin'ny talata dia namoaka volavolan-dalàna momba ny fomba fanazaran-tena nohavaozina ho an'ny Boeing 737 MAX, dingana iray lehibe hahatongavan'ilay fiaramanidina.
Nilaza ny FAA fa hisokatra ho an'ny fanehoan-kevitry ny besinimaro hatramin'ny 2 novambra ny volavolan-dalàna momba ny Flight Standardization Board izay alohan'ny hamaranana ny fomba fiasa. Manampy fitakiana vaovao ny tolokevitra hiatrehana ny rafitra fiarovana lehibe antsoina hoe MCAS mifamatotra amin'ny lozam-pifamoivoizana roa nahafaty olona 346 ary nitarika ny fiorenan'ny fiaramanidina tamin'ny martsa 2019.
Paul Hudson dia manome fahitana ary miahiahy momba ny fiaramanidina mamely ny lanitra indray.
Sheremetyevo dia mametraka mpamatsy horonantsary hanampiana ireo mpandeha tsy mahay mihaino sy miteny